#Breaking_News : လကျရှိ ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျဖို့ အီဂဈြ ကို ထှကျခှာသှားပွီ ဖွဈတဲ့ #သကျထားသူဇာ - SPORTS MYANMAR
#Breaking_News : လကျရှိ ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျဖို့ အီဂဈြ ကို ထှကျခှာသှားပွီ ဖွဈတဲ့ #သကျထားသူဇာ
အောငျလ အနျဆနျး ရဲ့ အောငျမွငျမှု ကို ဝနျးရံ အပွီးမှာပဲ နောကျထပျ မွနျမာပရိသတျတှေ ထပျမံ ဝနျးရံကွမယျ့ ကစားသမား တဈဦးရဲ့ ယှဉျပွိုငျမှုတှဟော မကွာခငျမှာ မွငျတှကွေ့ရဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ ကွကျတောငျ အားကစားမယျ သကျထားသူဇာ ဖွဈပွီး လကျရှိ ရယူထားတဲ့ အီဂဈြ International Series ရဲ့ ခနျြပီယံဆု ကို ကာကှယျဖို့အတှကျ အီဂဈြကို ထှကျခှာသှားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
International Series ပွိုငျပှဲဟာ Category3အမြိုးအစား ပွိုငျပှဲမြိုး ဖွဈပွီး ၊ ဆုကွေးက စုစုပေါငျးမှ (အမြိုးသားတဈဦးခငျြး ၊ အမြိုးသမား နှဈယောကျတှဲ ၊ အမြိုးသမီးတဈဦးခငျြး ၊ အမြိုးသမီး နှဈယောကျတှဲ ၊ အမြိုးသား + အမြိုးသမီး) ဒျေါလာ 10000 ခြီးမွှငျ့မှာပါ။
ဒါကွောငျ့ ခြီးမွှငျ့မယျ့ ဆုကွေး နညျးပါးတာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြ မွငျ့တကျခငျြတဲ့ ကစားသမား တှသော လာရောကျ ယှဉျပွိုငျကွပွီး ၊ သကျထားသူဇာ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမယျ့ အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြး ပွိုငျပှဲမှာ လကျရှိ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 100 အတှငျး ရပျတညျနတေဲ့ ကစားသမားက4ဦးသာ ပါဝငျနခေဲ့ပါတယျ။
သကျထားသူဇာဟာ အီဂဈြ International Series 2018 ရဲ့ လကျရှိ ခနျြပီယံ တဈဦးဖွဈတာကွောငျ့ ၊ ဒီပွိုငျပှဲမှာ သူမရဲ့ ခနျြပီယံဘှဲ့ကို ကာကှယျရမှာ ဖွဈသလို ၊ အခု ကငျြးပမယျ့ အီဂဈြ International Series 2019 ပွိုငျပှဲဝငျတှေ အားလုံးထဲမှာ (အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြး) ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြ အမွငျ့ဆုံး ကစားသမား အဖွဈ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျးအစားဆုံး ကစားသမား အဖွဈ ရပျတညျနတေဲ့ အပွငျ ၊ ဘိုငျ လဲ ရထားတာကွောငျ့ ရှုံးထှကျ အဆငျ့ကနသော ဝငျရောကျ ကစားရမှာပါ။
အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြး ပွိုငျပှဲအတှကျ လကျရှိ အခြိနျထိ စာရငျး ပေးသှငျးထားတဲ့ ကစားသမားပေါငျး က 49 ယောကျ အထိရှိပွီး ၊ အမွငျ့ဆုံး ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြ က သကျထားသူဇာ ဖွဈကာ ၊ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြ မရသေးတဲ့ ကစားသမာ6းယောကျ နဲ့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 1000 ကြျောမှာ ရပျတညျနတေဲ့ ကစားသမား 14 ယကျေ အထိ ပါဝငျနခေဲ့ပါတယျ။
သကျထားသူဇာ ကတော့ လကျရှိ ခနျြပီယံလဲ ဖွဈ ၊ ဒီပွိုငျပှဲကို ဝငျရောကျလာတဲ့ ပွိုငျပှဲတှေ အားလုံးထဲမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြလဲ အမွငျ့ဆုံး ဖွဈတာကွောငျ့ ၊ ဘိုငျ ရတဲ့ 8 ယောကျထဲမှာ ပါဝငျလြှကျ ရှိနပေါတယျ။
အဲဒီ ကစားသမား 8 ယောကျကတော့
1. သကျထားသူဇာ (ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 65)
2. ဂြျောဒနျဟတျ (ဝေးလျ – ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 77)
3. အဒကျဆိုကနျ (နိုကျဂြီးရီးယား – ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 82)
4. မာစီးယပပျ (ပီရူး – ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 94)
5. ကူဒါရာဘယျလီ (သီရိလင်ျကာ – ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 109)
6. ဒိုဟာ ဟနျနီ (အီဂဈြ – ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 118)
7. ဟာဒီယာ ဟိုနီ (အီဂဈြ – ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 119)
8. အမျရို (ဂြျောဒနျ – ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 153)
အခု အီဂဈြ International Series 2019 ပွိုငျပှဲကို မွို့တျော ကိုငျရိုမှာ အောကျတိုဘာလ 17 ရကျ ကနေ 20 ရကျနေ့ အထိ ကငျြးပသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ထူးခွားတာက ဒီပွိုငျပှဲမှာ သကျထားသူဇာဟာ နှဈယောကျတှဲ ပွိုငျပှဲတှကေို ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခွငျး မရှိတော့ပဲ ၊ တဈဦးခငျြး ပွိုငျပှဲကိုပဲ အာရုံစိုကျ ယှဉျပွိုငျသှားတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ ကံကောငျးပါစလေို့ပဲ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မကွာခငျကပဲ ဒီထကျ ပိုပွီး အဆငျ့မွငျ့တဲ့ မျောလဒိုကျ International Challenge 2019 မှာတောငျ တတိယ နရော ရအောငျ စှမျးဆောငျပွထားခဲ့သလို ၊ အဲဒီ ပွိုငျပှဲက အတှအေ့ကွုံကောငျးတှေ ၊ ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ ဖိအားတှကေ ကိုငျရိုမှာ အောငျပှဲခံနိုငျဖို့ အမြားကွီး အထောကျအကူ ဖွဈမှာပါ။
မိုဆာလတျ တို့ တိုငျးပွညျမှာ မွနျမာ့အလံကို နောကျတဈကွိမျ လှငျ့ထူပွခဲ့ပါဦးဗြာ………
#Breaking_News : လက်ရှိ ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်ဖို့ အီဂျစ် ကို ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ #သက်ထားသူဇာ
အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ အောင်မြင်မှု ကို ဝန်းရံ အပြီးမှာပဲ နောက်ထပ် မြန်မာပရိသတ်တွေ ထပ်မံ ဝန်းရံကြမယ့် ကစားသမား တစ်ဦးရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေဟာ မကြာခင်မှာ မြင်တွေ့ကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ကြက်တောင် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ရယူထားတဲ့ အီဂျစ် International Series ရဲ့ ချန်ပီယံဆု ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အီဂျစ်ကို ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
International Series ပြိုင်ပွဲဟာ Category3အမျိုးအစား ပြိုင်ပွဲမျိုး ဖြစ်ပြီး ၊ ဆုကြေးက စုစုပေါင်းမှ (အမျိုးသားတစ်ဦးချင်း ၊ အမျိုးသမား နှစ်ယောက်တွဲ ၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်း ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်တွဲ ၊ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) ဒေါ်လာ 10000 ချီးမြှင့်မှာပါ။
ဒါကြောင့် ချီးမြှင့်မယ့် ဆုကြေး နည်းပါးတာကြောင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် မြင့်တက်ချင်တဲ့ ကစားသမား တွေသာ လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး ၊ သက်ထားသူဇာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်း ပြိုင်ပွဲမှာ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အဆင့် 100 အတွင်း ရပ်တည်နေတဲ့ ကစားသမားက4ဦးသာ ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။
သက်ထားသူဇာဟာ အီဂျစ် International Series 2018 ရဲ့ လက်ရှိ ချန်ပီယံ တစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် ၊ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ သူမရဲ့ ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်ရမှာ ဖြစ်သလို ၊ အခု ကျင်းပမယ့် အီဂျစ် International Series 2019 ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ အားလုံးထဲမှာ (အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်း) ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် အမြင့်ဆုံး ကစားသမား အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းအစားဆုံး ကစားသမား အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ အပြင် ၊ ဘိုင် လဲ ရထားတာကြောင့် ရှုံးထွက် အဆင့်ကနေသာ ဝင်ရောက် ကစားရမှာပါ။
အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်း ပြိုင်ပွဲအတွက် လက်ရှိ အချိန်ထိ စာရင်း ပေးသွင်းထားတဲ့ ကစားသမားပေါင်း က 49 ယောက် အထိရှိပြီး ၊ အမြင့်ဆုံး ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် က သက်ထားသူဇာ ဖြစ်ကာ ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် မရသေးတဲ့ ကစားသမာ6းယောက် နဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် 1000 ကျော်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ကစားသမား 14 ယေက် အထိ ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။
သက်ထားသူဇာ ကတော့ လက်ရှိ ချန်ပီယံလဲ ဖြစ် ၊ ဒီပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ အားလုံးထဲမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက်လဲ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ဘိုင် ရတဲ့ 8 ယောက်ထဲမှာ ပါဝင်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီ ကစားသမား 8 ယောက်ကတော့
1. သက်ထားသူဇာ (ကမ္ဘာ့အဆင့် 65)
2. ဂျော်ဒန်ဟတ် (ဝေးလ် – ကမ္ဘာ့အဆင့် 77)
3. အဒက်ဆိုကန် (နိုက်ဂျီးရီးယား – ကမ္ဘာ့အဆင့် 82)
4. မာစီးယပပ် (ပီရူး – ကမ္ဘာ့အဆင့် 94)
5. ကူဒါရာဘယ်လီ (သီရိလင်္ကာ – ကမ္ဘာ့အဆင့် 109)
6. ဒိုဟာ ဟန်နီ (အီဂျစ် – ကမ္ဘာ့အဆင့် 118)
7. ဟာဒီယာ ဟိုနီ (အီဂျစ် – ကမ္ဘာ့အဆင့် 119)
8. အမ်ရို (ဂျော်ဒန် – ကမ္ဘာ့အဆင့် 153)
အခု အီဂျစ် International Series 2019 ပြိုင်ပွဲကို မြို့တော် ကိုင်ရိုမှာ အောက်တိုဘာလ 17 ရက် ကနေ 20 ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက ဒီပြိုင်ပွဲမှာ သက်ထားသူဇာဟာ နှစ်ယောက်တွဲ ပြိုင်ပွဲတွေကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မရှိတော့ပဲ ၊ တစ်ဦးချင်း ပြိုင်ပွဲကိုပဲ အာရုံစိုက် ယှဉ်ပြိုင်သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ကံကောင်းပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မကြာခင်ကပဲ ဒီထက် ပိုပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ မော်လဒိုက် International Challenge 2019 မှာတောင် တတိယ နေရာ ရအောင် စွမ်းဆောင်ပြထားခဲ့သလို ၊ အဲဒီ ပြိုင်ပွဲက အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ၊ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဖိအားတွေက ကိုင်ရိုမှာ အောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့ အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်မှာပါ။
မိုဆာလတ် တို့ တိုင်းပြည်မှာ မြန်မာ့အလံကို နောက်တစ်ကြိမ် လွှင့်ထူပြခဲ့ပါဦးဗျာ………